Qarax Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Gobalka Bakool. – Bogga Calamada.com
Qarax Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Gobalka Bakool.
February 28, 2016 12:57 pm Views: 9
Wararka laga helayo degamda Tiyeeglow ee gobalka Bakool ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qarax culus uu ka dhacay duleedka degmadaasi oo ka tirsan goobaha Xabashida Itoobiya duulaanka kaga suganyihiin gobalka Bakool.
Qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aasa ee meelaha fog laga hago ayaa lala beegsaday mid ka mid ah gaadiidka maleeshiyaatka dowlada ridada federaalka qaraxaasi oo la xaqiijiyay in khasaara uu geystay.
Wariye Ibraahim Isaaq oo ah wariyaha Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ee gobalka Bakool ayaa sheegay in tiro askar ah dhimasho iyo dhaawac ay ku nqodeen qaraxa islamarkaana burbur xoogan uu soo gaaray gaarigii miinada ay haleyshay.
Kolanyada qaraxa loo dhigay ayaa la xaqiijiyay iney kasoo baxeen degmada Tiyeeglow kuwaasi oo baadi goob ugu jiray meydadka tiro askar ah oo maalintii shalay looga dilay kamiin loogu dhigay deegaanaka Wasiilo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Tiyeeglow ee gobalka Bakool.